Igwe friji Evaporator Manufacturers and Suppliers - China friji Evaporator Factory
HA490 bụ ngwaahịa ihe Polyolefin. Ọzọkwa ụdị a nwere ike ịkọwa dịka EAA. Ọ bụ ihe nkiri na-egosi translucent na akwụkwọ ewepụtara. Nọmalị ndị mmadụ na-eji obosara nke 48cm na 50cm na ọkpụrụkpụ 100 micron na friji. HA490 adabara maka ijikọ akwa dị iche iche na ihe igwe, ọkachasị ...
PO na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri maka friji evaporator
Ọ na-gbanwetụrụ polyolefin ọkụ gbazee nkiri enweghị isi akwụkwọ. Maka ụfọdụ ndị ahịa na-arịọ arịrịọ na ọrụ aka ha, ihe gbazere agbaze na-enweghị akwụkwọ ewepụtara bụ ngwaahịa a nabatara na ahịa. Nkọwapụta a na-ejikọtakarị na 200m / mpịakọta wee jupụta na fim na afụ na tube tube dia 7.6cm. ...
Disposable CPE onu ogbom
Ngwa ngwa CPE a bụ ngwaahịa nke anyị na-etinye n’ahịa dabere na mkpa ụfọdụ ndị ahịa na-adabere na ngwaahịa. N'ihi nke a, anyị wuru ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anyị, zụta igwe eji arụ ọrụ, wee mepụta ngwaahịa dị ọnụ ala, na-emecha dị mma na nke kachasị dị ala. Anyị CPE apr ...